Golaha wasiirrada Soomaaliya oo maanta kulan yeeshay, iyo RW Saacid oo ka hadlay arimo kala duwan. – Radio Daljir
Diseembar 17, 2012 6:54 b 0
Muqdisho, 17, Dec- Golaha wasiirrada xukuumadda Federaaligaa ee? Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho , kaasoo uu shir-gudoominayay R/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Shirka ay maanta yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya waxaa ka qeyb galay wasiirrada, wasiirro ku xigeenada iyo wasiiru dowleyaashii uu maalmo ka hor magacaabay R/wasaare Soomaaliya.
Kulankani oo war-fidiyeenka dibada ay ka joogeen ayaa markii uu soo gaba gaboobay waxaa saxaafadda la hadlay R/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon waxaana uu faah-faahiyay qodobadii sida gaarkaa ay iskula gorfeeyeen R/wasaaraha iyo golihiisa.
R/wasaare Saacid ayaa tilmaamay in kulankooda ay uga wada hadleen sidii ay ummadda Soomaaliyeed ugu muujin lahaayeen kalsoonida ka dhaxeyso golaha wasiirada iyo sida ay mar walba ugu taagan yihiin wada shaqaynta shacabka iyo xukuumadda.
Kulankani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay isku arkaan xubnihii hore ee R/wasaaruhu uu magacaabay kolkii la magacaabay isaga iyo xubnihii uu dhawaan ku soo daaray liiska golaha.